musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Myanmar inopinda mwaka wemhemberero
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • Myanmar Breaking Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Nyamavhuvhu mwedzi wemhemberero nemhemberero muMyanmar, izvo zvinoita kuti ive nguva yakanakisa yekushanyira nyika yeSoutheast Asia. Sezvo maBuddha eMyanmar achigadzirira kupinda kumagumo kweBuddhist Lent, nharaunda dzakatenderedza nyika dziri kugadzirira kumitambo yakati wandei iyo ichaona vagari vemo kubva kumatunhu ese vakapfeka nhumbi dzavo dzakanakisa, vachiita mujaho wechikepe, vachipa nzou dzakakura zvidhori uye kuratidzira nemamirioni emarambi emafuta - ese akagadzirirwa kuitika kubva munaGunyana kusvika kutanga kwaGumiguru. Nguva yacho inoenderanawo nekupera kwemwaka wakasvibirira, ichivimbisa nzvimbo dzakasvibirira, tembiricha yakakwana pamazana makumi maviri neshanu kusvika pamadhigirii Celsius uye nemabhizimusi akanakisa pamitengo yehotera.
Mukuenderana nemhemberero dziri kuuya, Myanmar Tourism Kushambadzira yatanga chirongwa chezviitiko pane peji reFacebook, apo veruzhinji vanogona kuwana rumwe ruzivo nezve mhemberero nenzvimbo dzakakodzera dzekufarira. Karenda iyi zvakare inopa nhungamiro yakakodzera nguva pamhemberero, dzinoverengerwa zvichibva pakarenda remwedzi weMyanmar uye nekudaro dzinogona kusanzwisisika neimwe nzira. Iyo peji inovandudzwa zuva nezuva uye inoshanda seinobatsira uye inoshanda gwara kune vafambi. Iyo zvakare inogara ichigovana nhau pamusoro pezvinoitika munharaunda yekushanya muMyanmar pamwe nemavhidhiyo, mifananidzo, mablog mabhu uye yakawanda yedzimwe nyaya.
Myanmar Tourism Kushambadzira inokurudzira zvikuru vashanyi nevatori venhau vanobva kupasi rese kuti vauye vazvionere runako rweMyanmar uye vapinde mumhemberero.
“Kunyangwe paine kukura kwazvino kwenhamba yevashanyi vari kuuya kuMyanmar, huwandu chaihwo hwevashanyi vekunze kwenyika vanoshanyira nzvimbo dzakaita seBagan kana Inle Lake vanhu 280,000 XNUMX chete pagore, saka pane nzvimbo yakawanda yekugarisa vashanyi vakawanda. Nekuisa karenda rezviitiko zvinoshamisa paFacebook, tinotarisira kubatsira vashanyi nevamwe vashanyi pakuronga rwendo rwavo rwekuenda kana kutenderedza Myanmar, "akadaro Ma May Myat Mon Win, Sachigaro weKushambadzira kuMyanmar.
Mimwe yemitambo iri kuuya muMyanmar inosanganisira:
Manuha Pagoda Mutambo (Bagan, Gunyana 4 - 6, 2017)
Manuha Pagoda Mutambo unoitwa kwemazuva matatu kutanga kubva pazuva rakatangira Zuva Rizere reMwedzi reTawtalin (iwo mazuva anozosiyana zvichienderana neKarenda yeMyanmar). Vagari vemuMyinkaba vanopa makeke emupunga nemafuta echando akasanganiswa nevashanyi panguva yemutambo. Iyi tsika yechivanhu inonzi yakadzika kubva panguva yaMambo Manuha uye ichiri kuoneka pamutambo nhasi. Mamonki anoungana panguva yemutambo kuti vagamuchire zvipo zvekudya muhombodo hombe dzakatenderedza Pagoda. Akakwenenzverwa mapapier-mâché makwikwi emakwikwi anoitika panguva yeManuha Pagoda Mutambo uye iwe uchaona kuratidzwa kwemavara akapoterera guta nenzira dzeManuha King pachake, ingwe, mhou, nzou, mabhiza, nezvimwe.
Phaung Daw Oo Pagoda mutambo (Inle Lake, Gunyana 21 - Gumiguru 8, 2017)
Mutambo unoyevedza uyo mabhoti ane anosvika makumi mashanu kana makumi matanhatu evakwasvi vemakumbo vari kukwevera chikepe nemifananidzo inoyera yeBuddha kubva kune mumwe musha kuenda kune mumwe pagungwa. Iyo chaiyo purogiramu inowanzo kuzivikanwa chete masvondo mashoma pamberi uye pane nguva dzose pane mamwe "mazuva ekuzorora". Edza kuve uri wega chikepe pagungwa uye bvunza murume wechikepe kuti abvunze uko kufora kwacho kuchange kuchipfuura uye iwe unogona kuve nechokwadi chekugadzira mimwe mifananidzo mikuru yekufora uku. Iwo wakanaka mutambo wekushanyira kunyangwe ungave wakazara vanhu. Ronga kuve nemazuva akati wandei muInle Lake kuti uve nechokwadi chekuti hauzorasikirwa nemudungwe.
Kutamba nzou mutambo (Kyaukse, Gumiguru 4 - 6, 2017)
Kyaukse, angangoita maawa matatu kutyaira kubva kuBagan (chinhambwe chimwe chete kubva kuMandalay) inozivikanwa nembatya hombe dzenzou dzakagadzirwa pano. Varume vaviri vakapfeka iyo nzou yekupfeka vanoratidza kutamba kwechirobrac mumigwagwa yeKyaukse. Mutambo wakanaka wekuona hupenyu hwemumusha muMyanmar, uye zorora uine chokwadi, hakuna nzou chaidzo dzakabatanidzwa mumutambo uyu.
Thadingyut - mutambo wemwenje (Nyika yese, Gumiguru 4 - 6, 2017)
Kupera kweBuddhist Lent inguva yekubhadhara vabereki, vadzidzisi uye vanhu vakura. Pazuva rakazara remwedzi munaGumiguru (kazhinji pakati paGumiguru) dzimba nema pagodas zvine mwenje nemakenduru. Kana iwe uri munyika nhasi, vhenekera kenduru padyo nehotera yako uye ufambe-fambe neguta manheru (kana kushanyira Shwedagon Pagoda muYangon kana iwe ukazovapo) uye unakirwe nemashiripiti mamiriro.
Pachavewo nemitambo midiki (pwe) inorongwa mumataundi muMyanmar ese, kazhinji inosanganisira imwe yemhando yevaraidzo, mukana wekutenga uye dzakasiyana siyana chikafu.